Dowladda Somalia & Midowga Afrika oo heshiis ka gaaray sii joogitaanka Ciidanka AMISOM - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Somalia & Midowga Afrika oo heshiis ka gaaray sii joogitaanka Ciidanka...
Dowladda Somalia & Midowga Afrika oo heshiis ka gaaray sii joogitaanka Ciidanka AMISOM
Ururka Midowga Afrika ee [AU] & dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka heshiiyay mustaqbalka Ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee [AMISOM] ee ku sugan Soomaaliya, wax ka yar afar bilood inta uusan dhammaan muddada loo qorsheeyay inay joogaan Soomaaliya.
Qaraar la ansixiyay bishii June, ayaa la isku raacay in ciidamada AMISOM ay sii joogaan Soomaaliya illaa December 2021, markaas kaddibna ay u ambabixi doonaan dalalkooda. Laakiin Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay tallaabadaas sababo la xiriira khatarta Al-Shabaab ee dalka.
Warsaxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen AU iyo DFS ayaa tilmaamaya in arrimo dhowr ah la xaliyay, tallaabadan ayaa sii dheereyn doonta joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ilaa xasilloonida laga xaqiijinayo. Ciidamada ayaa inta badan waxaa dhaqaalahooda bixiya Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.
Waxay ku heshiiyeen in la dardargeliyo hirgelinta Qorshaha Kala -guurka Soomaaliya, kaas oo qirshuhu yahay in ciidammada AMISOM ay mas’uuliyadda amniga ku wareejiyaan Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed [SNA] in kasta oo si tartiib -tartiib ah loo dhaqan gelin doono.
Sidoo kale, labada kooxood waxay isku raaceen in Al-shabaab ay weli khatar weyn ku tahay dalka sidaa darteedna loo baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa kooxaha loogu yeero argagaxisada ee Al-Shabaab & Daacish.
Bayaankaan kasoo baxay Dowladda Federaalka & Midowga Afrika ayaa u muuqda mid AU ay hoos u dhigtay qiimeyntii dhowaan ay sameeyeen khubaro ka tirsan AU oo soo jeediyay sameynta Ciidamo isku dhafka ah oo ka socda UN, AU wixii ka dambeeya Dec 2021 , basle dowladda Soomaliya ay kasoo horjeesatay go’aanka khuburada.
AMISOM waxaa Soomaaliya ka jooga ku dhowaad 22,000 oo askari kuwaas oo ka hawlgala qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka, waxaana ay ka kala socdaan dalalka Kenya, Jabuuti, Itoobiya, Uganda, iyo Burundi, kuwas oo dalka jooga ilaa sanadkii 2007 -dii.
Dhawaan, Midowga Yurub wuxuu dhimay miisaaniyaddii hawlgallada Soomaaliya, sidaas darteedna wuxuu ku qasbay Ciidanka Kenya inay raadsadaan beddello kale si ay u daboolaan kharashka ku baxaya, waxaana ay ballan -qaadeen inay sii joogi doonaan ilaa ammar dambe dalka Soomaaliya.
Previous articleGolaha wadatashiga Qaran & Gudiyada doorashooyinka dalka oo kulan yeelanaya
Next articleTababaraha Arsenal oo weerar kala kulmay taageerayaasha Kooxdiisa